Ngakho-ke ungabuka i-Keynote yale ntambama kunoma iyiphi idivayisi | Ngivela kwa-mac
Ngakho-ke ungabona i-Keynote yale ntambama kunoma iyiphi idivayisi
UPedro Rodas | | Apple
Namuhla usuku olukhulu futhi ngokuqinisekile manje abasebenzi baseCupertino sebehamba kahle. Lapho kuqala ukuntwela kokusa e-United States, i-apula elilunyiwe lizokwethula ifoni yalo elandelayo enkulu. Izigidi zabalandeli sezivele zazi konke okwenzekayo namuhla emazweni aseMelika futhi ubufakazi balokhu ukuthi sizokutshela ukuthi ungayilandela kanjani isethulo kusuka kunoma iyiphi idivayisi.
Noma ngabe uvela emhlabeni we-Apple, umhlaba weWindows noma umhlaba we-Android, khona-ke sizokutshela ungayibuka kanjani i-Keynote kunoma iyiphi i-iPhone, i-iPad, iMac, i-PC, noma idivayisi ye-Android. Isethulo sizokwenzeka ngo-19: 00 kusihlwa (isikhathi senhlonipho yaseSpain) eBill Graham Civic Center.
1 Landela umcimbi kusuka kumadivayisi we-Apple
2 Landela umcimbi kusuka ku-Android noma iWindows
Landela umcimbi kusuka kumadivayisi we-Apple
Kusuka kunoma iyiphi idivayisi ye-Apple, okumele sikwenze ukufaka uhlelo lweSafari, faka iwebhusayithi esemthethweni ye-Apple bese ubheka indawo lapho kumenyezelwa khona iKeynote, lapho ngokucindezela ukusakazwa kwevidiyo komcimbi kuzoqala ukudlala. Khumbula ukuthi kuzodingeka ukuthi amadivayisi avuselelwe okungenani nge-iOS 7 futhi kwi-Mac ibe neSafari 6.0.5 nenguqulo ephakeme kune-OS X 10.8.5.
Endabeni Apple TV Into iyashintsha futhi ukuthi kwideskithophu uqobo uzoba nesithonjana esisha lapho ngokucindezela ungalandela isethulo kuthelevishini yakho inqobo nje uma uhlelo lohlelo okungenani the 6.2.
Landela umcimbi kusuka ku-Android noma iWindows
Uma uthathe isinqumo sokubuka umcimbi kusuka kudivayisi ye-Android noma iWindows PC, akutshele ukuthi uma unohlelo ku-PC yakho Windows 10, uzokwazi ukubona umcimbi ngokusebenzisa IMicrosoft Edge esizongena kuyo, njengeSafari, iwebhusayithi esemthethweni ye-Apple.
Uma lokho okufakile kunguhlobo oluphansi kune-Windows 10 noma ithuluzi elinohlelo lwe-Android, izinyathelo okufanele uzithathe ukubona umcimbi yilezi:
Landa uhlelo lwe-VLC ku-Windows noma ku-Android. I-VLC yeWindows, noma I-VLC ye-Android.
Uma sekufakiwe, siyayivula bese sikhetha inketho Ifayela> Vula Inethiwekhi
Isinyathelo esilandelayo ukufaka ikheli elilandelayo:
Manje kufanele ulinde u-19: 00 kusihlwa uma besenhlonhlweni noma ngo-18: 00 ntambama kimi uma ngiseGran Canaria.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Ngakho-ke ungabona i-Keynote yale ntambama kunoma iyiphi idivayisi
I-Apple Pay ifinyelela emabhange amasha angama-20 nasezikhungweni zezikweletu e-United States
I-Apple Store Online manje isivaliwe: Usuku lwe-Keynote ...